प्रधानमन्त्री देउवाले जोडदार रुपमा यसरी उठाए कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुराको मुद्दा, मोदी भए निलोकालो ! समाचार
प्रधानमन्त्री देउवाले जोडदार रुपमा यसरी उठाए कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुराको मुद्दा, मोदी भए निलोकालो !
भारतले नेपाली भूमि लिपुलेक, कालापानी र लिम्पियाधुरा हुँदै तिब्बतको मानसरोवर जाने सडक बनाएपछि दुई देशबीचको कूटनीतिक सम्बन्ध चिसिएको थियो । केही समयअघि मात्रै भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीले उक्त सडक निर्माणमा तीव्रता दिएको बताएका थिए । भिडियो स्रोत : सूत्र टिभी
२०७८ चैत्र २०, आईतवार प्रकाशित0Minutes 135 Views